Clinton ayaa sheegtay in Trump la siiyo fursad uu waddanka ku hoggaamiyo | Baydhabo Online
Clinton ayaa sheegtay in Trump la siiyo fursad uu waddanka ku hoggaamiyo
“Waxaan aragnay in waddankeennu u qaybsan yahay si ka qota dheer sidii aan u maleynaynay,” ayay tiri.
Dimoqraaddigu waa inay xasuustaan in “aan nahay American marka hore, waddaniyiin marka hore, waxaan dhammaanteen doonaynaa waxa waddankan u wanaagsan”, ayuu sheegay.
“Waan ka xumay in aynaan ku guulaysan doorashadan dhaqammada wanaagsan ee naga dhexeeya iyo aragtida aan ka qabno waddankeenna,” ayay sheegtay Mrs Clinton oo taageerayaasheeda kula hadlaysay New York.
“Weli ma aynaan gaarin dhalada saqafka ugu dheer uguna adag. Laakiin maalin uun, qof ayaa gaari doona,” ayay tiri Mrs Clinton, iyadoo ka hadlaysay guuldarradeeda inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota waddanka Maraykanka.